Apple Bhadhara Cash padhuze nekutanga neIOS 11.1 | IPhone nhau
Zvese zvinoita sekunge zvinoratidza kuti Appel Kubhadhara Cash ichave ichiwanikwa munguva pfupi iri kutevera, panongoburitswa vhezheni yekupedzisira yeIOS 11.1, iyo yave kuwanikwa kune vanogadzira nevashandisi veRuzhinji Beta. Apple inoenderera ichikwenya iyo yekupedzisira ruzivo rweiyo system uye kwete chete nevashandi vayo vanga vachizoyedza, asiwo kune vatove vashandi veApple chitoro vanazvo pazvinhu zvavo.
Kunyangwe panguva ino muIOS 11.1 Beta yatinayo pasina kana chiratidzo cheichi chiitiko, vashandi veApple vangadai vakaisa imwe yemukati nhoroondo iyo inogonesa iri basa. Apple saka inoita kuti basa riwanikwe kune yakakura nhamba yevanhu uye nekudaro kukwanisa kuiyedza zvakanyanya kusati kwatanga kuitiswa kwekupedzisira.
Ruzivo urwu rwunouya kwatiri kubva kuMacRumors, uyo anoti akafonerwa nemushandi weApple ndokupihwa ruzivo rwekuti Apple Pay Cash inoshanda sei. TOKuwedzera pakuve neBeta yakaiswa uye nekuisa imwe yakatarwa, maaccount eICloud anofanirwa kupihwa basa iri, nekudaro kudzivirira kuti mumwe munhu ane chimiro anogona kugonesa basa pasina mvumo yeApple.
Nezve basa remauto, mukati meApple Pay Cash yekumisikidza maitiro, isu tinofanirwa kuisa data redu (zita nekero) asiwo mamwe ma data senge Social Security nhamba (muUSA). Hatizive kuti ndezvipi zvavanobvunza kunze kweUnited States, kunyangwe kana basa racho richiwanika kunze kwenyika yeNorth America. Tichafanirwa kumirira Apple kuti itange basa iri neIOS 11.1 kana vhezheni yekupedzisira yagadzirira, kunyangwe paigona kuve nemamiriro asingawanzo ayo akatangwa pakutanga mune imwe yemabheta anowanikwa kune vanogadzira uye nekudaro kukwanisa kuiyedza pa nhamba hombe yemidziyo isati yatanga. final.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Apple Bhadhara Cash padhuze nekutanga neIOS 11.1